I-Ocean Treehouse - I-Airbnb
545 okushiwo abanye
Shirley, British Columbia, i-Canada
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Ineke
U-Ineke Ungumbungazi ovelele
I-Tree House yethu inakho konke okudingayo ukuze ujabulele ukuhlala kwakho kule ngxenye yezwe emagebhugebhu. Ngokubuka kweJuan de Fuca Straight kanye neFrench Beach kunezindlela eziningi eziseduze ongaqwala kuzo kanye namabhishi afana neFrench Beach, Flea Beach, China Beach ongazihlola. Ebusuku buka ukushona kwelanga kusukela “epheshi” eliyimfihlo ebhishi lase-French, uhambo oluyimizuzu emi-2 nje.
I-Tree House isemngceleni we-French Beach Park futhi iqhele ngamamitha angu-100 ukusuka endlini enkulu. Inombhede olingana nendlovukazi eyodwa, ngakho izohlalisa abantu ababili kodwa sibe nezivakashi ezinengane eyodwa elala e-Pack and Play noma e-chesterfield.Kunobhavu oshisayo eduze kwendlu enkulu ongawusebenzisa.
Ayikho isevisi yebhasi eya eShirley ngakho imoto iyisidingo. Qiniseka ukuthi uthenga igilosa yakho negesi e-Sooke njengoba zingekho igalaji likaphethiloli noma izitolo zegrosa ngale kwe-Sooke kuze kufike e-Port Renfrew. U-Shirley akanawo umakhalekhukhwini futhi i-wifi ingase ibe nebala ngezinye izikhathi.Qiniseka ukuthi unenombolo yendlu yethu nezikhombisi-ndlela zokuya endaweni yethu nawe.
Kunezindawo zokudlela ezintathu phakathi kwemizuzu eyi-10 ukusuka e-Tree House:
U-Shirley Delicious, nokudla kwasekuseni okumnandi usuku lonke, amasobho, okokusonga, ikhofi nama-muffin,pp88
I-Stoked Pizza eqhele ngamaminithi angu-3 nje ne-Point No Point nesidlo sayo esihle kanye nokubukwa okuhle kwe-Ocean.
Kunomzila osuka phansi komgwaqo wethu ongena eFrench Beach Park odlula ehlathini uye ogwini. E-Tree House kukhona umzila omfushane ongenela e-French Beach Park ukuya "e-Perch" lapho izihlalo ezimbili kanye nomgodi womlilo zikulindile.
Ababungazi bakho, u-Dale no-Ineke
Mina noDale sesihlale eShirley cishe iminyaka emithathu ngemva kokuba sinqume ukuthatha umhlalaphansi ngokugcwele.
Sakhangwa yile ndawo ngenxa yobuhle bayo nombono wayo omuhle weNdlela Eqondile. Siyathanda ukubuka imikhomo namabhubesi olwandle edlula, sibuka izinkozi ezihlala izidleke kanye nokushona kwelanga okumangalisayo phezu kwamanzi. Sizobe sikhona uma usidinga kodwa futhi sizoyihlonipha imfihlo yakho
Kukhona I-Hot Tub eduze kwendlu enkulu eneshawa eceleni kwayo. Sicela ugeze ngaphambi kokusebenzisa ubhavu. Umuntu angakwazi futhi ukugeza endlini yezihlahla futhi asebenzise ama-bathrobes ukuze afike kubhavu.
4.92 out of 5 stars from 545 reviews
4.92 · 545 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-545
Buka noma ulalele i-orcas namabhubesi olwandle adlulayo. Kukhona isidleke sokhozi eduze futhi zindiza ngamagatsha! Ngakho sinethemba lokuthi sizobabona bezalela kulo nyaka. Indlela engcono kakhulu yokuzibona isuka “ePerch” noma i-Look Out in French Beach.
Sikhona uma usidinga kodwa sizokunikeza ubumfihlo obufunayo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Shirley namaphethelo